Ngwa SPL na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Refrigeration
Enweghị Refriji ọ gaghị ekwe omume ịnụ ụtọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'oge a n'afọ. Na-enweghị Refrigeration anyị enweghị ike iche n’aga n'ihu na ahụike ụwa, azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe obibi na oge ezumike na-adị ndụ.
Site na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu ma na-agbanwe àgwà iri nri, imeziwanye arụmọrụ ume nke ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa nzụlite dị mkpa maka ndị ahịa na-achọ ibelata ụgwọ ọrụ. Nke a bụ ihe kacha mkpa na ụlọ ọrụ na-edozi nri, ebe oke oke dị warara.
SPL Evaporative Condenser na AIO ngwugwu Refriji usoro anapụta elu arụmọrụ na a pụrụ ịdabere na arụmọrụ ya ahịa ịzọpụta nnukwu ego.
Na SPL, anyị bụ ndị ọkachamara maka ahaziri ahaziri, nke ọtụtụ afọ gara aga na mmekorita ya na ndị ahịa anyị na ụlọ ọrụ nyocha. Anyị mepụtara ahịa-eduga ngwọta maka a dịgasị iche iche nke ngwa, si Mmiri ara ehi, Erimeri, Meat, na ndị ọzọ na Mkpụrụ osisi na akwukwo nri nhazi Refeyim.